Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 20/11/2020)
sodcaalladoodii oo tareen ee Italy ayaa si gaar ah u qurux badan si loo hubiyo in ka dhigi aad u safarto weheliyaan Terra Cinque u dhexeeya Levanto iyo La Spezia, ama safar hoos xeebta bari ka Rimini in Catania.
Tareenadu dhaadheer uga yar carbon qiiqa badan diyaarado ama baabuurta. Sida laga soo xigtay baadhitaan, gawaarida ayaa soo labanlaabaya xaddiga CO2 badan tareenada samayn.
Marka lagu qiyaaso dhimashada per rakaabka-mile, duulaya uga ammaan badan yahay driving. Halkan sababta: waxaa jira fursad yar qalad aadanaha, waana wax aad u dhib badan in la noqdo duuliye marka loo eego helitaanka laysanka darawalnimada. Qaado galay xaaladda waddada account iyo daal on drives dheer, Way fududahay in la arko sababta doorashada diyaarad waa ammaan badan baabuur.
Dayuurada masaafo dheer laga yaabaa in si ka dhaqso badan u safraya tareen, laakiin masaafo gaaban, safarka hawada wax ku badbaadin waqtiga. First, aad u baahan tahay si aad u hesho garoonka diyaaradaha – inta badan xaaladda ka fog meelaha la deggan yahay. Waxaad sidoo kale ubaahantahay inaad halkaa joogtid ugu yaraan saacad kahor waqtigaaga duulimaadka si aad uqorto ama aad u marto amniga. Haddii aad hubi boorsooyinka, aad u baahan doontaa in ku sugnaa ugu WAYDAARKA ah. Iyo in badan hortooda oo dhan kasta dib u dhac duulimaadka ama socod ama baska u dhexeeya boosteejada garoonka diyaaradaha iyo irdaha.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)